Waa kuwee ciyaartoyda ka baxsanaya Iiraan? - BBC News Somali
Waa kuwee ciyaartoyda ka baxsanaya Iiraan?
Lahaanshaha sawirka KIRILL KUDRYAVTSEV
Image caption Alizadeh waxay dareentay in guulaheeda loo diiday
Go'aanka ugu dambeeyay ee ay Kimia Alizadeh ugu dhawaaqday inay ka tanaasuleyso dhalashada Iiraan ayaa ka mid noqonaya kuwo badan oo ay ciyaartoy heer sare ah uga carareen waddankaas.
Sababo kala duwan ayey Iiraan uga goosanayeen ciyaartoy badan oo xirfadahooda dhinaca ciyaaraha ay kala duwan yihiin.
Alizadeh waxay taariikhda gashay markii ay ka qeyb qaadatay lagdinta loo yaqaanno taekwondo, xilligii ay socdeen ciyaarihii olombikada ee sanadkii 2016-kii.
Iyadoo ay da'deedu tahay 18 sano ayey ka guuleysatay Nikita Glasnovic, oo u dhalatay dalka Sweden, taasoo ay ku garaacday 5-1.
Tartankaas ayey billad ka qaadatay waxayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee reer Iiraan ah oo qaadata billadda Olombikada.
Laakiin waxay dareentay in guusheeda ay dowladda Iiraan u adeegsato qaab aysan iyadu raalli ka ahayn, oo ay si khaldan dadka ugu soo jiidanayaan.
Isbuucii lasoo dhaafay ayey iyadoo 21 jir ah baxsatay, waxaana la isla dhex marayay warar sheegaya inay magangalyo ka raadineysay waddanka Netherlands.
Inkastoo aysan xaqiijinin goobta ay ku sugan tahay, waxay barteeda Instagram-ka ku shaacisay inay ka fogaatay Iiraan, ayna u dulqaadan weysay waxa ay ugu yeertay "caddaalad darro iyo khasbid".
"Waxaan qori jiray wax walba oo ay iyaga ii sheegaan, hadalkii ay ii yeeriyaan ayaana dhihi jiray. Jumlad kasta oo ay afka iiga yeeriyaan ayaan ku celinayay. Wax dan ah kama laha nolosheenna, waxay noo isticmaalayeen sidii qalab", ayey ku tiri qoraalkeeda.
Waxay isku tilmaantay inay ka mid tahay "malaayiin haween ah oo la heystayaal ku ah Iiraan".
Shohreh Bayat, Mitra Hejazipour iyo Alireza Firouzja
Image caption Sawirro muujinaya Shohreh Bayat oo aan xijaab xirneyn ayaa naxdin badan ka abuuray gudaha Iiraan
Inkastoo baxsashada Alizardeh ay saameyn weyn leedahay, haddana kaligeed ma aha ciyaartoyda Iiraan waddanka ka baxay sanadkan 2020-ka gudihiisa.
Shohreh Bayat iyo Mitra Hejazipour, oo ah ciyaartoyda ugu caansam ee chess-ka dalka Iiraan, ayaa labadaba waddanka laga eryay ka dib markii ay xijaabka iska dhigeen iyagoo tartamo uga qeyb galaya dibadda.
Tallaabada ay ciyaartoydaas dumarka ah qaadeen waxaa loo tixgaliyay meel ka dhac ay ku sameeyeen labiska ay amartay shareecada Islaamka ee uu dalkaas ku dhaqmo.
Bayat ayaa lasoo sawiray iyadoo aan xijaab xirneyn, xilli ay ku guda jirtay tartanka horyaallada haweenka adduunka ee 2020-ka.
Markii ugu horreysay ee ay sawirrada soo baxeen, aabeheed ayaa sheegay in khamaarkii ay xirneyd uu uga dhacay si aan ku talagal ahayn. Laakiin waxaa la shaaciyay sawirro kale oo muujinaya iyadoo aan xijaab xirneyn oo kulamo kale ka qeyb galeysa.
Aabaheed ayaa hadda sheegaya "inay ka walwalsan tahay sidii ay xirfaddeeda ugu sii wadan lahayd gudaha Iiraan", ana dooneyso inay waddan kale ku sii wadato.
Dhinaca kale, 2-dii bishan January, haweeney rug caddaa ku ah ciyaaraha chess-ka, oo u u dhalatay Iiraan, oo lagu magacaabo Mitra Hejazipour, ayaa waddanka laga eryay ka dib markii la sheegay inay xijaabka iska dhigtay iyadoo ku sugan tartan ka socday magaalada Moscow.
Hejazipour, oo hadda sheegtay inay meel qarsoon ku ciyaari doonto ayaa iyadoo ku sugan dalka Faransiiska loo sheegay inaysan boos ku lahayd jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Dhacdo kale, dabayaaqadii 2019-kii, Alireza Firouzja, oo ah ciyaaryahanka labaad ee ugu da'da yar ciyaaraha chess-ka adduunka ayaa tartan ka qeyb galay isagoo wata calanka xiriirka ciyaaraha chess-ka ee FIDE, halkii uu ka wadan lahaa calanka Iiraan.
Lahaanshaha sawirka AAMIR QURESHI
Image caption Karimi-Machiani wuxuu markii dambe u tartamayay Iiraan, ka dib markii uu dhammaaday wakhtigii la xayiray
Arrimo siyaasadeed awgood, Iiraan waxay ciyaartoydeeda ka mamnuucday in ay la loollamaan ciyaartoyda reer Iisraa'iil, sababtuna waxay tahay in Iiraan aysan aqoonsaneyn dowlad la yiraahdo Iisraa'iil.
Hase yeeshee maadaama go'aanka Iiraan uusan waafaqi karin shuruucda caalamiga ah ee ciyaaraha, ciyaarto badan ayaa culeys ka dareemay mamnuucistaas. Gaar ahaan waxay si weyn u saameysay ciyaaraha ay xirfaddooda wada leeyihiin Iiraaniyiinta iyo Israa'iiliyiinta, sida musaaracada iyo lagdinta.
Sida caadiga ah, shuruucda ciyaaraha ma oggola in ciyaartoydu ay xushaan cidda la tartameysa.
Sidaas darteed ciyaartoyda reer Iiraan ee cadaadiska weyn kala kulma dhinaca dowladdooda ayaa ku khasbanaaday inay si toos ah ugu gacan seyraan amarka mamnuucista Israa'iil.
Sanadkii 2017-kii waxay arrintaas saameysay Alireza Karimi-Machiani, oo ka qeyb galayay tartanka musaaracada dhalinyarada ka yar 23 jirka ee adduunka.
Tartankii oo bartanka maraya ayaa la ogaaday in Karimi-Machiani uu wajihi doono ciyaartoy reer Israa'iil ah, haddii uu ka guuleysto qofka markaas ku aaddanaa.
Tababaraha ciyaartoyga reer Iiraan ayaa warkaas ogaaday xilli uu Karimi-Machiani loollan kula jiray ciyaartoy kale.
Islamarkiiba wuxuu ku qeyliyay Karimi-Machiani, isagoo ka dalbanaya inuu guul darro qaato.
Taasi waxay sababtay in Karimi-Machiani ciyaaraha laga mamnuuco muddo 6 bilood ah, halka tababarihiisana la mamnuucay 2 sano.
Guul darradii uu ciyaartoyga reer Iiraan u qaatay si uusan ula tartamin nin Israa'iili ah waxay sababtay inuu xilka iska casilo madaxa ciyaaraha musaaracada ee dalka Iiraan, kaasoo sheegay "in aysan sax ahayn in ciyaaryahan lagu kalifo inuu guul darro qaato, ama uu warqad dhakhtar raadiyo si uu xanuun been ah u sheegto".
Lahaanshaha sawirka Kiyoshi Ota
Image caption Mollaei (midig) waxaa lagu amray inuu guul-darro ka qaato Khalmurzaev - balse wuu diiday
Saeid Mollaei wuxuu noqday horyaalkii ciyaaraha lagdinta miisaankeedu yahay 81kg, ee sanadkii 2018-kii. Laakiin markii uu horyaalnimadiisa ku difaacanayay tartankii Tokyo ka dhacay 2019-kii, waxaa lagu amray inuu guul daro ka qaato loollankii uu kula jiray ciyaartoyga horyaalka u ah Ruushka ee ee lagu magacaabo Khasan Khalmurzaev.
Sababtu waxay ahayd mid la iska wada ogyahay - oo ah in uusan wajihin ciyaaryahan reer Israa'iil ah, oo lagu magacaabo Sagi Muki.
Laakiin Mollaei refusedwuu diiday inuu guul darrada qaato.
Wuu sii watay dagaalkiisa, ugu dambeyntiina waxaa ka adkaaday ciyaaryahan kale oo lagu magacaabo Matthias Casse, kaasoo u dhashay dalka Belgium, oo ay ku kulmeen ciyaartii afar-dhammaadka.
Muki wuxuu ciyaartii kama dambeysta ahayd uga guuleystay Casse, wuxuuna noqday horyaalka cusub.
Mollaei waxaa soo wajahday cabsi uu u qabay naftiisa iyo qoyskiisa, maadaama uu ka tallaabsaday sharciga waddankiisa.
Ciyaartoygan ayaa u sii baxsaday dhinaca Yurub.
Xiriirka ciyaaraha lagdinta ee Judo Federation waxay arrintaas darteed ciyaarahooda uga mamnuuceen dalka Iiraan.